Abahlinzeki be-Disc Harrow neFektri - China Abakhiqizi beDiski beDiski
Imininingwane yomkhiqizo Uchungechunge lwe-1BQX i-Light-duty Disc Harrow ifanele ama-pulverized and loosing clods ngemuva kokulima nokuhlela umhlaba ngaphambi kokutshala emhlabeni olinyiwe. Imishini ingenza inhlabathi nomanyolo kuhlangane, futhi kususe isiphunzi sezitshalo enhlabathini ekhanyayo noma emaphakathi nokulungisa umbhede wembewu ozotshalwa. Uchungechunge lwe-Light-duty Disc Harrow frame lwenziwe ngeshubhu yensimbi efanelekayo, Izakhiwo zazo zilula futhi zinengqondo, ziqinile futhi zihlala isikhathi eside, zilula ukusebenza, kulula ...
Imininingwane yomkhiqizo 1HJX medium-disc disc harrow ilungele ukuchoboza nokukhulula amabhlogo enhlabathi ngemuva kokutshalwa nokulungiswa komhlaba ngaphambi kokuhlwanyela. Ingakwazi ukuxuba inhlabathi nomanyolo ezweni elinyiwe futhi isuse iziphunzi zezitshalo. Umkhiqizo unesakhiwo esizwakalayo, ukuqina okuqinile, ukuqina, ukusebenza okulula, ukunakekelwa okulula, futhi kungagaya ngempumelelo futhi kuqhubekele enhlabathini ukwenza umhlaba ubushelelezi, lokhu kuhlangabezana nezidingo zezolimo ezinamandla. Okuqukethwe kwediski kungu-6 ...